DataNumen: Ndị mmekọ
At DataNumen, Anyị na-achọ na ịnabata mmekọrịta iji mụbaa ahịa iru na-enye ndị ahịa anyị ọzọ complementary ngwaahịa na ọrụ nke na-eme ka itinye ego na ahụmịhe ha dịkwuo mma DataNumen.
Anyị na-etinye akụ dị ukwuu na mmemme mmemme mmekọrịta anyị; gụnyere ọzụzụ, ahịa, ọrụ ndị ọkachamara na nkwado mmepe.
Ụdị DataNumen Mmemme Mmekọrịta
Enterprise Ngwọta Onye Mmekọ Mmemme
Ndi otu ihe mmekorita nke ulo oru bu isi ihe DataNumenEbumnuche iji gbatị iru ngwọta nke ụlọ ọrụ. DataNumen na ndị mmekọ ya na-enye akụrụngwa na ndị otu ọkaibe iji belata ọnwụ na ọdachi data, bulie arụmọrụ arụmọrụ, ma melite ahụmịhe ndị ahịa ha.
Mgbakwunye mmemme bụ nnukwu ohere maka ị nweta ego site n'ire ngwaahịa ngwaahịa mgbake anyị. Ọ bụrụ n’inwe ma ọ bụ jikwaa weebụsaịtị, ịnwere ike isonye na mmemme mmemme anyị. Anyị na-anabata onye ọ bụla, site na ndị na-edebe ibe obibi dị ntakịrị na magazin, ọnụ ụzọ, na ụlọ ahịa.
DataNumen awade ohere maka resellers n'ịwa ọzọ ego site n'isonyere na DataNumen Reseller Onye Mmekọ Mmemme. A mfe aha usoro ga-ekwe ka ị na-akụkụ nke ụwa kasị ukwuu na most ihe omuma ihe omuma ihe omuma ihe ndi ozo.
Chagbanwe njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ metụtara ọdịnaya bụ ụzọ magburu onwe ya iji mepụta mmasị na njem na weebụsaịtị gị. Ewezuga ndị ọbịa na-akwaga na saịtị gị site na ndị mmekọ na-emekọrịta mgbanwe, elele nke ụba okporo ụzọ ọchụchọ enwetara site na ịnwe websaịtị gị site na njikọta nwekwara ike buru oke.
DataNumen Outlook Repair 8.6 wepụtara na July 10, 2021
DataNumen SQL Recovery A tọhapụrụ 6.0 na June 22, 2021